Masoja Anouraya Vanhu Vanodarika Gumi kuChiweshe
Chivabvu 06, 2008
Vatsigiri veMDC gumi nemumwe vanonzi vakarohwa vakafa kuChiweshe kuMashonaland Central, usiku hweMuvhuro. Vanhu ava vanonzi vakaurayiwa nemasoja pamwe nevechidiki veZanu PF, vachitungamirwa nevakakunda musarudzo yemumiriri weMazowe North muparamende, VaCairo Mhandu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaMhandu kanawo kumapurisa pane zviri kuitika munzvimbo iyi. Mashoko atiri kutambira anotiwo, vamwe vanhu vanodarika makumi maviri, vanonzi vakakuvadzwa zvakaipisisa mumhirizhonga iyi.
Zvinonziwo masoja aya ari kuenderera mberi achiuraya vanhu muShamva North neMount Darwin East. Hutungamiri hweMDC mudunhu iri huri mushishi kuedza kutakura vakakuvara vachivaendesa kuzvipatara pamwe nekutakura mitumbi yevakapondwa ava vachiyiendesa kumochari yepachipatara cheHoward.
Kushungurudzwa kwevatsigiri veMDC kuri kuenderera mberi munzvimbo zhinji dzakaita seMaramba, kuMashonaland East, uko mumwe mudzimai anonzi akafenda akafa neMuvhuro apo vechidiki veZanu PF vairova zvakaipisisa mwanakomana wake.
Ukuwo, mutumbi wemumwe wechidiki weMDC, uyo anonzi akapondwa neveZanu PF masvondo maviri apfuura, unonzi uchiri kumochari yepaMutawatawa sezvo pasina ari kuda kumuviga.
KuHwedza papurazi reGwai, vechidiki veZanu PF nevakarwa hondo yerusununguko vanonzi varova zvakaipisisa vatsigiri veMDC uye vari kuvarambidza kuti vaende kunorapwa.
Jonga Kandemiiri weStudio 7 abata vaimirira MDC musarudzo dzekutsvaga mumiriri weMazowe North muparamende, VaBiggie Chigonero, avo vamuudza kuti masoja amuka chibhebhenenga mudunhu iri uye mapurisa haana zvaari kuita mukuedza kuvamisa.